Cuntooyinka leh fitamiin K: sida loo helo nafaqadan faa iidada leh | Ragga Stylish
Ma ogtahay in si aad u hesho cunto caafimaad leh aad u baahan tahay inaad ku darto cuntooyin kugu filan fiitamiin K? Waana taas, sida laga soo xigtay daraasadaha, nafaqadani waxay ka caawisaa jirkaaga inuu qabto hawlo taxane ah oo caafimaadkaaga ku ilaaliya.
Baadi cuntooyinka caafimaadka leh ee kaa caawin doona inaad la kulanto baahiyahaaga maalinlaha ah ee fitamiin K (75 mcg maalin walba waa lagula talinayaa):
1 Sida loo helo fitamiin K
1.2 Khudaarta caleenta ah
1.4 Ha ilaawin fitamiin C sidoo kale
1.5 Maxay yihiin cuntooyinka kale ee leh fitamiin K ee aan ku dari karo cuntadayda?
Sida loo helo fitamiin K
Faytamiin K waa inuu ku jiraa cuntadaada, laakiin sababtee? Kaalintee buu nafaqadan ka ciyaaraa? Cilmi baaris ayaa muujisay in fiitamiinkan uu faa iido u leeyahay caafimaadka. Isaga ayey ku fiican tahay xaalad lafo, wareegga dhiigga iyo wadnaha.
Sida nafaqooyinka kale ee muhiimka ah, habka ugu wanaagsan ee lagu helo fitamiin K waa khudaarta. Haddii aad cuntid cunto hodan ku ah kooxdan cuntada, waxa ugu horreeya ayaa ah inaan kuugu hambalyeeyo inaad si guul leh u aasaastay cunto caafimaad leh, wax aan sidaa u fududayn qof walba. Waxaa sii dheer, xaqiiqadan fudud laakiin muhiimka ah waxay ka dhigan tahay inaad u badan tahay inaad durba heshay ku filan nafaqadan. Si kastaba ha noqotee, hoosta waxaan ku siineynaa fursadaha ugu qanisan ee fitamiin K si aad iyaga u tixgeliso:
Haddii aad rabto inaad kordhiso qaadashada fitamiin K, tixgeli khudaarta sida brussels sprouts. Cuntadani waa mid joogto ka ah liisaska kuwa ugu caafimaadka badan, waxyaabaha ku jira fitamiinkan ayaa ka mid ah sababaha. Haddii aad doorbideyso cunno kale inay noqoto ishaada ugu weyn ee fitamiin K, tixgeli broccoli, asparagus, chives, iyo karootada.
Dhinaca kale, suxuuntaada ku dar xoogaa caleemo dhir ah Waa istaraatiijiyad kaa caawin doonta inaad hesho qiyaas wanaagsan oo fiitamiinkan ah marka cuntada ugu muhiimsan aysan ahayn khudradda.
Sidaad ogtahay, khudradda caleenta ahi kama maqnaan karto cuntadaada. Kooxdaan cuntada waxay kuu damaanad qaadayaan tiro badan oo fiitamiino iyo macdano ah, oo ay ku jiraan fitamiin K. Sidaa awgeed, haddii aad rabto inaad kordhiso qiyaastaada maalinlaha ah ee fiitamiinkan, ku xooji sharadkaaga khudaarta caleenta ah. Kordhinta khudaarta caleenta ah sida isbinaajka, biyo-biyoodka iyo kale ee caanka ah ayaa si gaar ah xusid mudan..
Dhammaantood waa ikhtiyaarro aad u fiican, laakiin waa inaad taas xusuusataa kale wuxuu matalayaa waxtar weyn oo labadaba fitamiin k iyo nafaqooyinka kale ee muhiimka ah, sidaa darteed aad ayey u qiimo badan tahay inaad tixgeliso markaad dukaameysigaaga toddobaadlaha ah sameyneyso.
In kasta oo ilaha ugu wanaagsan ee fitamiin K (kan ugu sarreeya) laga helo khudaarta, nafaqadan kuma koobna kooxdan cunnada. Miraha sidoo kale waxay ku siinayaan fitamiinkan, xoogaa yar, laakiin sidoo kale aad u xiiso badan marka laga eego dhinaca nafaqada. Tiradu waa yar yihiin, laakiin bedelkeeda waxay leeyihiin faa iidada ay ku fududahay in la qaado, tayo qiime weyn leh haddii hawl maalmeedkaagu kaa celinayo guriga maalintii oo dhan.
Sidaa darteed, khudaartu waa fiican yihiin marka aad fursad u hesho inaad guriga wax ku karsatid ama makhaayad wax ku cunto, halka khudradda ayaa kaa caawinaysa inaadan joojin ku darista fitamiin K (iyo sidoo kale nafaqooyinka kale ee aadka muhiimka ugu ah jirka) markaad xafiiska joogto ama isboortiga sameyneyso. Oo hadda maadooyinka dabiiciga ah ay ku jiraan moodada, xitaa way fududahay in la cuno miro iyo khudaar labadaba intaad ku guda jirtid howlaha maalinlaha ah.
Ha ilaawin fitamiin C sidoo kale
Fiiri maqaalka: Cuntooyinka leh fitamiin C. Halkaas waxaad ka heli doontaa cuntooyinka kaa caawin doona inaad buuxiso baahiyahaaga nafaqadan muhiimka ah.
Laakiin waa maxay miraha leh fitamiin K? Avokado, oo caan ku ah (waana sababta aad ugu badan tahay inaad si joogto ah u cuntid), waa midhaha ugu qanisan fitamiin K. Laakiin waxaa jira miro kale oo aad xiiseyneyso inaad ku dhejiso gaarigaaga wax iibsiga haddii aad rabto inaad hubiso inaad cuntid cunto hodan ku ah fitamiin K. Tani waa kiiska plums, canab, rummaanka, kiwi iyo, dabcan, tufaax. . Farsamo ahaan waa berry, laakiin waxyaabaha ku jira buluugga waa in sidoo kale la sheegaa.
Maxay yihiin cuntooyinka kale ee leh fitamiin K ee aan ku dari karo cuntadayda?
Waxaa jira cuntooyin siiya fiitamiin K badan iyo kuwa kale xoogaa yar, laakiin Markay tahay ka hortagga guuldarradeeda, waxaa habboon in la isku daro inta badan, ka wanaagsan. Kuwa soo socdaa waxay bixiyaan wax ka yar kale ama avokado, laakiin tallaal kasta ayaa la tiriyaa.
Isticmaalka saliida canola ee karinta waa mid ka mid ah xeeladaha kuu ogolaanaya inaad hesho qadar yar oo fitamiin K. Salmon, prawns iyo, wixii ka sarreeya, tuna tuna qasacadaysan, waa kalluunka mudan in la muujiyo marka la eego xadiga fitamiin K
Hadana haddii aad jeceshahay lowska (wax ka shaqeynaya danahaaga, sida dhammaan khubarada ay kula taliyaan caafimaad wanaagsan) Waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato in cashews iyo nuts-ka geedku ay sidoo kale bixiyaan fitamiinkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntooyinka leh fitamiin K